ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေး နှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ ဝန်ကြီး Jean-Marc Ayrault က မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတအသစ် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေး နှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ ဝန်ကြီး Jean-Marc Ayrault က မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတအသစ် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်
Birmanie - Election du nouveau président – Déclaration de Jean-Marc Ayrault
L’élection de Htin Kyaw marque la poursuite de la transition du pays, après la large victoire aux élections législatives de Aung San Suu Kyi et de son parti, la Ligue nationale pour la Démocratie, symbole des attentes fortes du peuple birman.
La France se tient aux côtés de la Birmanie pour l’accompagner sur le chemin de la démocratie, du développement et de la réconciliation nationale.
Myanmar/ Burma – Election of the new president – Statement by Jean-Marc Ayrault, Minister of Foreign Affairs and International Development (March 15)
France welcomes the election of the new president of Burma, conducted within the framework of the current constitution, followingademocratic election process.
It wishes him every success as he undertakes the exceptionally important duties entrusted to him by the Burmese Parliament.
France stands alongside Burma on its path toward democracy, development and national reconciliation.
ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေး နှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊
ဝန်ကြီး Jean-Marc Ayrault ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
(မတ်လ ၁၅-ရက် ၊ ၂၀၁၆-ခုနှစ်)
လက်ရှိဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကေက်ပွဲစနစ်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတအသစ်ကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ခြင်းအတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ချီးကျုးဂုဏ်ပြု လိုက်ပါသည်။
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော သမ္မတသစ်အတွက် မြန်မာ့လွှတ်တော်မှပေးအပ်လိုက်သည့် အဆင့်မြင့်သောတာဝန်များကို အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သူမ၏အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသည် အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲကြီးတွင် ကြီးမားသောအောင်မြင်မှု့ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဦးထင်ကျော်အား သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မှတ်တိုင်ထူလိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကာလကြာရှည်စွာ စောင့်စားမျှော်လင့်နေသည့် မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ပြယုဂ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံအားထောက်ခံ ကူညီရန် ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အသင့်ရှိနေပါသည်။